Fanomanana fifidianana : Nirotsaka ny 1,2 tapitrisa Dolara -
AccueilRaharaham-pirenenaFanomanana fifidianana : Nirotsaka ny 1,2 tapitrisa Dolara
08/12/2017 admintriatra Raharaham-pirenena 0
Vola 1, 2 tapitrisa Dolara no narotsaky ny firenena amerikanina ao amin’ny kitapom-bola hiombonana amin’ny fanohanana ny SACEM mba hanampiana ny CENI amin’ny fanomanana ny fifidianana eto Madagasikara . Nankasitraka izany fihetsika nataon’ny Amerikanina amin’ny alalan’ny masoivohon’izy ireo ny filohan’ ny CENI nandritra ny kabariny, izay nilaza fa « manamarika firaisan-kina eo amin’ny fanotronana ny zotram-pifidianana eto amintsika, izao fihetsika izao ». Nandritra ny kabary izay nataony ihany koa no niresahan’ny filohan’ny vaomiera mahaleo tena misahana ny fifidianana, Hery Rakotomanana mikasika ny fanomanana ny fifidianana madio mangarahara « Na ahoana na ahoana , izahay dia vonona hatrany hiantoka ny mangarahara sy hampanjaka ny lalàm-panorenana sy ireo lalàna manan-kery ».
Misy moa ireo fepetra efatra izay nambarany ahafahana manao izany, ary hanalana ny ahiahin’ ny besinimaro «Betsaka ny ahiahy mikasika ny fikirakirana sy ny fikarakarana ny lisi-pifidianana, kanefa fomba efatra no hiantohanay ny mangarahara: Amin’ity indray mitoraka ity dia miverina indroa any amin’ny Fokontany ny lisitra mba hamarinin’ny mpifidy amin’ny famaranana vonjimaika amin’ny faha-31 janoary 2018 amin’ny famaranana tanteraka ny lisitra amin’ny faha-15 aprily 2018. Amin’ny fisokafan’ny CENI amina fitsirihana iraisam-pirenena ny lisi-pifidianana, ka ilay manam-pahaizana hanatontosa izany dia eo anatrehan’ny solontenan’ny fiarahamonim-pirenena sy ireo antoko mpomba sy mpanohitra ny fitondram-panjakana. Eo amin’ny fanatsarana sy ny fanohizana ny fahafahan’ny mpifidy mitsirika ny anarany amin’ny alalan’ny internet » . Amin’ izao fotoana izao dia miandry ny tompon’andraikitra ny CENI amin’ny fanomezana ny daty izay hanatanterahana izay fifidianana izay « Mahatoky ihany koa ny CENI fa ho tononon’ny tompon’andraikitra ato ho ato ny datim-pifidianana, mba hiala izay mety ho monomonona, na ahiahy isan-tokony fa samy hibanjina tanteraka ny fifidianana ny rehetra, ary izahay dia afaka hametraka amin’izay ny tetiandrom-pifidianana raikitra ».